I-Alt Tags Futhi Title Tags Ukusebenza nge Semalt
Isizathu esenza abantu bakhethe ukufaka izithombe emgqeni ukuqinisa umlayezo oqukethwe kuwo futhi bakhanga abantu ukuba bafunde. UFrank Abagnale, i-8 (Semalt iMenenja yeNtuthuko yeMakhasimende, uthi kufanele uhlale ukhumbule ukungeza izimfanelo ze-altri ezithombeni ozibekayo. Amathegi we-Alt namathekisthi athuthukisa umbhalo okwanele injini yokusesha izikhawu zokuzikhahlela ukuze zenze ukubonakala kwakho kubonakale. Ithegi ye-alt isifingqa konke okubonayo esithombeni ngamagama.
I-Alt Tags ne-Title Tags
Amathegi we-Alt namagama ayimaki futhi azisa kuphela okuqukethwe nokusebenza kwesithombe kulelo khasi. Abafundi besikrini bancike emathekheni e-alt ukuchazela abantu abayizimpumputhe nabasobala ukuthi isithombe sithini - usando o flash externo.
Ngakho, zonke izithombe kufanele ziqukathe amathegi we-alt. Abakhi nje kuphela i-SEO yakho kodwa futhi basiza abantu ababonakala bengaboni kahle ukuthi baqonde ukusetshenziswa kwesithombe kokuthunyelwe. Izimfanelo zesihloko akuzona okumelwe zibe nazo ezihlokweni, kodwa zingabonakala zizuzisa kwezinye izimo. Noma kunjalo, ukubashiya ngaphandle ngeke kulimaze isihloko sakho.
Abantu abasebenzisa izithombe ukukhulisa isikhangiso sokubukwa kweposi kuphela kufanele bayeke ukwenza kanjalo. Isizathu ukuthi kufanele abe ku-CSS hhayi emahlokweni we-HTML. Uma kungekho ndlela ukuthi ushintshe izithombe, sebenzisa isici esingenalutho, esishiya incazelo engenalutho. Uma abafundi bekrini behlangana nomthamo wesithombe esinjalo, bazovele bewusuke.
I-Alt Text ne-SEO
I-Google igcizelela ukuthi abasebenzisi bayo kufanele badale imibhalo ye-al yezithombe zabo ngoba ibeka inani elikhulu kubo. Isibonelo, ngokusho kokuhlaziywa kokuqukethwe kwe-Yoast SEO, kufanele ube okungenani isithombe esisodwa ngethegi e-alt egxile egameni elingukhiye noma ibinzana elizokwandisa ikhwalithi yendaba yakho. Noma kunjalo, njengoba abasebenzisi benza kanjalo, akufanele bagaxekile igama elingukhiye kuwo wonke amathegi e-al. Amathegi we-altare nombhalo aqukethe amagama angukhiye kufanele ahambisane nezithombe eziphezulu nezithombe ezihlobene.
Uma kukhona igama elingukhiye elingasiza abantu bathole okuqukethwe esithombeni, khumbula ukuyifaka e-alt.
Alt and Title Izimfanelo ku WordPress
Enye indawo lapho ungasebenzisa khona ama-tag namagama ezithombeni ezitholakalayo ezifakiwe kwi-WordPress. I-WordPress inika ithegi yombhalo njengethegi elizenzakalelayo i-alt uma umnikazi ukhohlwa ukuthi unamathisele eyodwa ezithombeni zakhe. Ikopisha umbhalo wesitayela kusuka kuncazelo yombhalo bese uyadlulisa emgqeni we-tag we-alt. Kungcono kunokuba nesici esingenalutho, kodwa kusenamandla ekuthuthukiseni ukufinyeleleka kwesayithi lakho.
Thatha isikhathi sokudala ithegi yokufundisa e-informative bese uyifaka ezithombeni zakho zithombe. Isixhumanisi se-WordPress singakuvumela ukuba ufake ngesandla umbhalo we-alt ngokuchofoza esithombeni bese ukhetha ukuhlela.
Indlela kuphela yokuthi isithombe se-SEO singakwazi ukuzuza isihloko sakho kanye nokuthunyelwe okulandelayo uma uthola imininingwane encane kahle. Ngaphezu kwalokho, ngeke ushiye abantu abangaboni kahle kusuka kokuqukethwe kwakho.